> Resource> iPhone> Olee naghachi Notes si zuru iPhone, iPad ma ọ bụ iPod Touch
Enwere m ike naghachi ndetu na m zuru iPhone site na kọmputa?
Otu agadi iPhone e zuru si m mgbe m nọ na-aga. M mgbe nile synced ekwentị site na iTunes na m na laptọọpụ, a Windows 7 igwe. Olee otú m nwere naghachi ọ bụla ndetu si iTunes na laptọọpụ? Bụ n'ebe a ngwá ọrụ nke ga-enyere m hụwa a stof?
Dị ka anyị maara, na iTunes ndabere faịlụ bụ ụdị ihe SQLitedb faịlụ na ị gaghị ele ọdịnaya nke ya, ka naanị ewere data n'ime ya. Iji nweta data site na ya, i kwesịrị ịdabere na a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ nke nwere ike wepụ ya. N'ezie, e nwere ndị dị otú ahụ a ngwá ọrụ nke na-enye gị ka ị na-agbake Cheta na gị zuru iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka na laptọọpụ. A bụ m nkwanye: Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (n'ihi na Windows ọrụ) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery).
Download free ikpe version n'okpuru na-agbalị ya maka free! The Windows version-enye gị ohere kpọmkwem ike iṅomi na-agbake data site na ngwaọrụ gị. Wepụ iTunes ndabere faịlụ, ị nwere ike họrọ ihe ọ bụla version: iPhone 4, iPhone 3GS, iPad 1 ma ọ bụ iPod aka 4. All n'ime ha nwere ike ime ya n'ụzọ zuru okè.
Nzọụkwụ 1: Họrọ iTunes ndabere nke ngwaọrụ gị ka iṅomi
N'ihi na Mac ọrụ, ẹkedori omume na e nwere abụọ mgbake ụdịdị maka gị nhọrọ. Họrọ "naputa site na iTunes ndabere File". All iTunes ndabere faịlụ gị iOS ngwaọrụ na-egosipụta ebe a. Họrọ onye maka ngwaọrụ gị na pịa "Malite iṅomi" wepụ ndabere.
N'ihi na Windows ọrụ, igba egbe Wondershare Dr.Fone maka iOS (Windows) na-aga "naputa site na iTunes ndabere File" nhọrọ n'elu. Ebe ị nwekwara ike na-ndepụta nke iTunes ndabere faịlụ gị iOS ngwaọrụ. Choos onye gị zuru iPhone na pịa "Malite iṅomi" na-aga futher.
Nzọụkwụ 2: Preview na-agbake ndetu si zuru iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka
Mgbe iṅomi okokụre, niile data na iTunes ndabere faịlụ a ga-amịpụtara na-egosipụta na edemede. Ịnwere ike ihuchalu ọ bụla n'ime ha na zuru ezu. N'ihi na ndetu, họrọ udi nke "Notes" na n'aka ekpe nke window. Ị nwere ike gụọ ọdịnaya detailedly. Mark na-ekwu ị chọrọ iji naghachi na ị nwere ike ịzọpụta ha na kọmputa gị site na ịpị "Naghachi" button.
Cheta na: Wondershare Dr.Fone maka iOS-enye gị ohere kpọmkwem iṅomi gị iPhone 4, iPhone 3GS, iPad 1 ma ọ bụ iPod aka 4 naghachi furu efu data na ya. Dị nnọọ ime ya na mgbake mode nke "naputa site na iOS Ngwaọrụ".
Otú ndabere iPhone Notes enweghị iTunes
Otú ndozi iPhone gaghị ahapụ ma ọ bụ ịnata ozi ederede nsogbu
Sere ese adịghị egosi na gị iPhone? Ebe a bụ Your Ngwọta